६ वर्षमुनिका बच्चालाई कस्तो व्यवहार ? | Educationpati.com
२०७३ माघ २२ गते २१:५५मा प्रकाशित
१० महिनामाथिका बच्चाहरू हरेक कुरामा चासो राख्ने, सिक्न चाहने र चकचके स्वभावका हुन्छन् । उनीहरूको यो व्यवहार ६ वर्षसम्म बढ्दो क्रममा हुन्छ । बच्चालाई ठेगानमा राख्नै गाह्रो भयो भन्ने हरेकजसो अभिभावकको गुनासो हुन्छ । आखिर यो उमेरका बच्चासँग कस्तो व्यवहार गर्ने ? बालमनोविज्ञ सानु अमात्यका सुझाब यस्ता छन्ः
१. एक वर्षआसपासको उमेरमा पुगेपछि बच्चाहरू हरेक कुरामा चासो राख्छन् । हरेक नयाँ–नयाँ कुरामा आकर्षित हुन्छन् । त्यसैले एकदेखि ६ वर्ष उमेरका केटाकेटीले धेरै सूचना संकलन गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूलाई जस्तो कुरा सिकाइन्छ त्यस्तै सिक्छन् र त्यही कुरा दिमागमा सञ्चित हुन्छ । त्यसैले गलत कुरा बच्चालाई नसुनाउनुहोस्, नसिकाउनुहोस् । तपाईंले सिकाएका कुराले नै उनीहरूको भोलिका दिन तय हुन्छन् ।
२. बच्चाहरू जिज्ञासु हुने भएकाले प्रश्न धेरै गर्छन् । यस अवस्थामा उनीहरूको प्रश्न टार्ने, गलत जवाफ दिने या गाली गर्ने कुनै पनि काम नगर्नुहोस् । यस्तो व्यवहारले उनीहरूमा नकारात्मक असर पर्छ । उनीहरूको कतिपय चासो मेटाउन नसकिनेखालका भए भने अन्य कुरातिर ध्यान तानेर उम्किन भने सक्नुहुन्छ । तर, झुट र गलत जवाफ दिनु हुँदैन । केटाकेटीको जिज्ञासामा सही जवाफ दिँदा तत्कालका लागि निकै फाइदा गर्छ ।
३. सबै बच्चा एकै खालका हुँदैनन् । उनीहरूको स्वभाव मिल्दोजुल्दो भए पनि चाहना फरक–फरक राख्न सक्छन् । उनीहरूको चाहना बुझेर मात्रै आवश्यकता पूरा गरिदिनुपर्छ । बच्चालाई अवसर र वातावरण दुवै चाहिन्छ । अवसर दिएर वातावरण नदिने तथा वातावरण दिएर अवसर नदिने हो भने काम लाग्दैन । यस पाटोमा घर र स्कुलका अभिभावक गम्भीर हुनुपर्छ ।
४. बच्चाहरूका गतिविधि मन नपर्दा अभिभावक जबरजस्ती रोक्न खोज्छन् । तर, बच्चा आफ्ना गतिविधिमा किन रोक लगाइएको हो जान्न चाहन्छन् । उनीहरूले जवाफ खोजिरहेका हुन्छन् । जबरजस्ती गर्दा उनीहरूले जवाफ पाएका हुँदैनन् र झगडा गर्छन् । त्यसैले, यस्तो पाटोलाई व्यवहारबाटै बुझाउनुपर्छ । केही सामान फाल्ने, चलाउने गर्छन् भने कुनै त्यस्तै थोत्रा सामान खसालेर फुटेको देखाइदिएपछि चलाउन नहुने रहेछ भन्ने सिक्न सक्छन् । बच्चालाई हेर, सिक, सुन, बुझ अनि गरको तरिकाले सिकाउनुपर्छ ।
५. बच्चालाई कहिल्यै कमजोर मूल्यांकन नगर्नुहोस् । यसले बच्चालाई निरुत्साहित पार्छ । बच्चाको मनोबल कमजोर भयो भने ठूलो हुँदासम्म नकारात्मक प्रभाव पारिरहन्छ । उनीहरूलाई ‘तिमी सक्छौ’ भनेर ऊर्जा दिनुपर्छ ।
६. अधिकांश अभिभावक बच्चालाई डर देखाएर तह लगाउन खोज्छन् । तर, हाउगुजीले बच्चालाई राम्रो गर्दैन । यो वेला चेतना जति विकास भयो त्यति राम्रो हुन्छ । बच्चाको जिज्ञासा र इच्छा दबाउन हाउगुजी देखाउने तरिकाले राम्रो गर्दैन । कहिल्यै भूत आउँछ, पुलिसले लान्छजस्ता डर देखाएर बच्चाका प्रश्न दबाउने प्रयास नगर्नुहोला ।